Al-Shabaab iyo Ciidanka Kenya ku dagaalamay Mandheera | KEYDMEDIA ONLINE
Gudoomiyaha Mandheera Cali Roba ayaa dhawaan sheegay in Magaaladda 50% ay gashay gacanta Al-Shabaab.
MANDHEERA, Kenya - Ugu yaraan hal qof oo shacab ah ayaa la xaqiijiyay inuu ku dhintay, mid kalena ku dhawaacmay dagaal culus oo Al-Shabaab iyo Ciidanka Kenya ku dhexmaray galbeedka magaaladda Mandheera, oo ku dhaw xuduuda Soomaaliya.
Dadka ku nool degaanka uu dagaalka ka dhacay oo lagu magacaabo Wako Dadacha ayaa sheegay inay maqlayeen rasaas culus oo ay is-waydaarsanayeen labada dhinac, iyadoo markii dambe dib loo riixay Al-Shabaab.
Wako Dadacha wuxuu 150-KM galbeed uga beegan yahay Mandheera, waxaana la sheegay in halkaasi ay ka jirto cabsi xoog leh oo ku saabsan in Al-Shabaab la wareegto kadib markii ay kusoo bateen weerarada.
Gudoomiyaha Mandheera Cali Roba ayaa maalmo kahor sheegay in Magaaladda 50% ay ku jirto gacanta Al-Shabaab, islamarkaana ay ka qaado dadka degaanka Xoolo ZAKO ah iyo Lacag canshuur ah.
Wuxuu ku eedeeyay dowladda Kenya inay ka gaabisay amniga gobolka Waqooyi Bari, islamarkaana Ciidankeeda ay noqdeen kuwa baqaya oo xitaa naftooda difaacan karin marka Al-Shabaab weerar kusoo qaado.
Tan iyo 2011 markii Ciidanka Kenya soo galeen Soomaaliya, degaanada iyo degmooyinka ku yaalla xadka labada dal waxay noqdeen meelo Al-Shabaab ku xoog badan tahay oo ay ka sameysatay Jabhadda Al-Nusra oo u qaabilsan weerarada Kenya.
Waxaa ka dhacay Kenya weeraro aan horey dalalka kale ee Geeska Afrika ka dhicin, kuwaasoo ay kamid yihiin kuwii lagu qaadey Westgate Mall, Dusit D2 hotel iyo Jaamacadda Garissa oo dhacay inta u dhaxaysay 2013 illaa 2020.